Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Koobka Macau GT oo uu kafaalo qaaday Sands China Title
Sands China Ltd. waxay ahayd kafaala-qaadka horyaalka ee Sands China Macau GT Cup usbuucan, kaas oo soo dhaweeyay darawalada baabuurta jinsiyada ee adduunka oo dhan si ay ugu tartamaan tartanka baabuurta saxiixa ee magaalada, Macau Grand Prix.
Sanduuqa Shiinaha ee maal-gelinta tartanka waa qayb ka mid ah taageerada joogtada ah ee shirkadda ee horumarinta ciyaaraha iyo dalxiiska isboortiga ee Macao, si kor loogu qaado dadaalka dalxiiska ee dawladda Macao. Waxa kale oo ay taageertaa dedaalka dawladda ee qabashada 68-aad ee Macau Grand Prix in kasta oo ay jiraan caqabadaha joogtada ah ee masiibada, dadaalka loogu jiro in tamar badan lagu geliyo bulshada iyada oo loo marayo dhacdada caanka ah ee magaalada oo dhan.
Madaxda maamulka Sands China Ltd. iyo xubnaha kooxda ayaa waxaa hogaaminayay madaxweynaha shirkadda Dr. Wilfred Wong si ay u arkaan baabuurta ay ku xardhan tahay calaamada Sands China ee shabkada bilawga ah iyo inay ka soo qaybgalaan xaflada abaalmarinta abaalmarinta tartanka ka dib Axadda.
Darawalada matalaysa Macao, Hong Kong, iyo dhul waynaha ayaa ku tartamay Sands China Macau GT Cup, iyaga oo ku tartamayey baabuurta tartanka ugu sareeya ee Lamborghini, Aston Martin, Mercedes, Porsche, Audi, iyo BMW.
Sands Shiinaha waxa ay rajaynaysaa in tartanku uu noqon karo hab lagu taageero dadka xiiseeya ciyaaraha maxaliga ah iyo in la kobciyo fursadaha wax-iswaydaarsiga si ay uga caawiyaan sare u qaadida tartankooda caalamiga ah.
Sands China Ltd. waxay leedahay taariikh soo jireen ah oo ah taageeridda horumarinta dhacdooyinka ciyaaraha ee Macao. Shirkaddu waxay kafaala qaaday, martigelisay, ama abaabushay dhacdooyin isboorti oo badan sannadihii la soo dhaafay, oo ay ku jiraan kubbadda koleyga, kubbadda cagta, golf-ka, feerka, orodka iyo kuwa kale oo badan. Sands Shiinaha ayaa inta badan ka faa'iidaysta fursadaha ay soo bandhigaan tartamadan iyo ciyaaraha bandhiga si ay u martigeliyaan munaasabadaha caawinta sida rugaha caafimaadka dhalinyarada iyo munaasabadaha diirada lagu saarayo bulshada si ay ula falgalaan bulshada iyo si kor loogu qaado saamaynta togan ee dhacdooyinka ee magaalada. Shirkaddu kama aysan niyad jabin taageeradeeda dhacdooyinka isboortiga ee Macao, in kasta oo ay jiraan dhibaatooyinka uu keenay deegaanka faafa.